Ahoana no hanombohana amin'ny fifandraisana: tsy misy toro-hevitra 13! - Fifandraisana
Ahoana no hanombohana amin'ny fifandraisana: tsy misy toro-hevitra 13!
Ny fifandraisanareo dia tonga amin'ny fotoana izay tsy miasa intsony ho an'ny iray aminareo.
Fa ianareo kosa mbola mifankatia sy mifampikarakara, ka tsy tianao ho tapitra ny zavatra.
Fa kosa, te-hiverina indray amin'ny fifandraisanareo ianareo ary manatsara ny toe-javatra amin'ity indray mitoraka ity.
Ahoana no anaovanao azy?
Ireto misy torohevitra tena ilaina harahina izay afaka hahatonga ny fifandraisanao 'vaovao' ho sambatra sy ho salama kokoa noho izay tonga hatreto.
1. Makà fotoana kely.
Tsy tranga 'fialan-tsasatra' ity ary hahitana ny fahatsapana ny fiainana tokan-tena aminao.
Izy io dia ny famelana ny fifandraisana hampihena ny fombam-pihetseham-po mety misy amin'izao fotoana izao.
Mandany fotoana mifanalavitra miaraka amin'ny fifandraisana kely na tsy misy dia hanome anao ny fahatsapana ratsy mety ho nohazoninao hanararaotana mora foana.
Mety tsy hanjavona tanteraka izy io, fa hihena kosa izany amin'ny fotoana ahafahanao mieritreritra mandanjalanja bebe kokoa momba azy.
ny fomba hialana amin'ny olona tsy tia anao
Azonao atao ny manangona ny eritreritrao, mieritreritra izay tianao hahatongavan'ny fifandraisanao, ary miomàna ara-tsaina amin'ny fanombohana vaovao.
Azonao atao ny mamantatra ireo lamina manokana mifehy ny fifandraisanao sy ny fomba mety simba na ovaina ho lasa tsara kokoa.
Ny fotoana mifanalavitra dia ahafahanao tsy mahita azy ireo koa, izay manome toerana fiandohana tsara hanombohana.
Ity vanim-potoana ity dia mety mila roa andro fotsiny, na herinandro farafaharatsiny.
2. Ifanakalozy hevitra ny zavatra tsapanao tsirairay.
Rehefa samy vonona ianareo dia tonga ny fotoana hipetrahana ary hanao resadresaka momba ny fahatsapanao, ny fahasosoranao ary ny ratranao.
Tsy ho fifanakalozan-dresaka mora izany, fa zava-dehibe ho an'ny roa tonta ny mahatsapa fa afaka manala zavatra amin'ny tratrany.
Fa ny fandehanao maninona no zava-dehibe - BETSAKA!
Voalohany, miezaha hampiasa fanambarana 'I' araka izay azo atao. Miresaka momba ny fomba ianareo mahatsapa ary inona ianareo mieritreritra, fa tsy inona izy ireo atao ary ahoana izy ireo ataovy izay hahatsapanao.
“Mahatsiaro ho tsy voahaja aho amin'ny tsy fahampian'ny fiheverana rehefa mijanona tara any am-piasana ianao nefa tsy manontany raha mety amiko.”
Toa tsara lavitra noho ny:
'Tena tsy manaja ianao rehefa mivoaka misotro toaka miaraka amin'ireo namanao miasa nefa tsy misahirana manontany akory raha mety amiko izany!'
Ny fanambarana 'I' dia hahatonga ny sakaizanao tsy hiaro tena kokoa ary hanaiky bebe kokoa ireo teboka nolazainao.
Faharoa, mba hanampiana ny tsirairay aminareo hahita ny fehezantenin'ny hafa amin'ny fomba fijeriny, miezaha mandrafitra ny resadresaka rehetra ho toy ny resaky ny namanao.
Miresaka ny sakaizan'izy ireo ity namana ity fa tsy ianao. Ity dia tokony hanampy anao handre zavatra mazava kokoa ary hamela anao hieritreritra izay torohevitra azonao omena ny namana iray izay nanana izany fitarainana izany tamin'ny namany.
Rehefa manana an'ity chat ity dia andramo ny tsy hitohy mandritra ny taona maro. Fepetrao ny tenanao, hoy, 10 isa avy eo ary mifandimby hiteny.
Mety hanampy anao aza izany raha tsy mamaly avy hatrany ny hevitr'izy ireo ianao. Io dia ahafahana mandroso mialoha ny resaka fa tsy manjary midona amin'ny teboka ifandirana manokana.
Soraty amin'ny sombin-taratasy ny hevitrao ary avy eo mifanome azy ireo amin'ny farany. Io dia hahafahanareo roa handinika bebe kokoa ny zavatra nolazain'ny iray hafa.
Mety hahasoa kokoa aza ny fisarahana andro iray na roa hafa hahafahanao mandrindra tsara ny zavatra.
3. Mitadiava fomba hifandraisana mandroso.
Ny resaka sarotra amin'ny teboka teo aloha dia tsy ny fotoana farany ahafahanao mandefa ny fitarainanao.
Raha ny marina, ny fifandraisana salama dia iray amin'izany ny roa tonta dia mahatsapa fa afaka maneho ny fihetseham-pony momba ny zavatra nataon'ny hafa.
Ny zavatra ilainao hiaraha-miasa dia ny fomba tsara indrindra hifandraisana.
Angamba ianao manana 'mic open' ora amin'ny ora voatondro isan-kerinandro, izay, amin'ny fomba mitovy amin'ilay resaka etsy ambony, dia mamela ny tsirairay aminareo hiteny tsy misy fahatapahana mba hampahafantatra ny hafa ny fihetseham-ponao sy raha nisy fotoana rehefa nanelingelina anao izy ireo tamin'ny herinandro lasa.
Fomba hafa azo atao mifanoratra taratasy izay ahitana ireo eritreritra sy fahatsapana ireo ihany.
mandra-pahoviana no raiki-pitia ny lehilahy iray
Ny famakiana zavatra iray, ho an'ny olona maro, dia hahatsapa ho tsy dia voafitaka loatra noho ny resaka iray.
Ny taratasy dia azo vakiana mifanalavitra ary afaka omena fotoana ianareo roa hieritreritra ny zavatra nosoratan'ny iray hafa ary hangatsiaka ny fahatsapana.
Io dia ahafahana maneho ny olana tsy dia atahorana loatra ny fifanatrehana mafana.
Azonao atao ny mifanakalo hevitra fohy momba ny taratasinao rehefa avy eo raha tianao izany.
4. Diniho ny torohevitry ny mpivady.
Mahafinaritra ny fanirianao tsy ny hanomboka toko vaovao amin'ny fifandraisanao fotsiny, fa ny boky vaovao iray manontolo.
Fa dia dia sarotra ny manatrika anao roa ihany.
Hisy sakana amin'ny fahombiazanao ary mila mitady fomba handresena ireo vato misakana ianao.
Izany no ahafahan'ny antoko fahatelo manampy, indrindra rehefa manana fiofanana sy fahaizana ilaina hitarika anao amin'ny vahaolana mety amin'ny olana iray izy ireo.
Raha tena hanomboka indray eo amin'ny fifandraisanareo ianao dia mandoa vola amin'ny fanoloran-kevitra ho an'ny mpivady sasany. Ny tolo-kevitray manokana momba an'io dia ny serivisy an-tserasera izay hanoro anao ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisanao amin'ny tany mafy. Mba hiresahana iray fotsiny izao.
5. Manolo-tena amin'ny famelana ny lasa hiaina taloha.
Ireo zavatra nolazaina sy natao tao amin'ny fiarahana hatreto dia tsy mora adino na mamela heloka foana.
Fa ny zavatra iray azonao atao dia ny manohitra ny filana hamerina azy ireo hiverina indray izao.
Mihena ny mandeha manodidina ny zavatra mitovy mandritra ny volana isam-bolana na isan-taona.
Nanana ny fifanakalozan-dresaka lehibe nataonao ianao ary antenainao fa nahita fomba iray handefasana ireo fitarainana ankehitriny. Ny lasa dia azo avela amin'ny lasa.
Amin'ity fomba ity, ianareo roa dia manomboka amin'ny takelaka madio. Fantatrao fa tsy hotsaraina ianao na hosazina noho ny zavatra nataonao teo aloha.
Fantatrao fa ny zava-dehibe izao dia ny fihetsikao sy ny fomba itondranao ny tsirairay mandroso.
Azo antoka fa mety mbola mamakivaky ny fihetseham-po manodidina ireo fisehoan-javatra taloha ireo ao anaty ianao, saingy tsy manome tanjaka vaovao azy ireo amin'ny fiverenanao aminy amin'ny resaka.
Raha toa ka manampy izany, isaky ny mahatsiaro alaim-panahy hamoaka olana misy tsilo amin'ny lasa ianao, dia alao sary an-tsaina ny tenanao mitazona solika amin'ny alàlan'ny afo kely - raha manapa-kevitra ny handatsaka azy ianao dia fantatrao fa hihamafana kokoa na hipoaka aza ny zavatra.
6. Miasa amin'izay zava-dehibe indrindra amin'ny vadinao.
Amin'izao fotoana izao dia tokony hanana fahatakarana tsara kokoa momba ireo olana lehibe indrindra ananan'ny mpiara-miasa aminao sy ny fifandraisanao ianao.
Ireo dia milaza aminao ny zavatra lanjan'izy ireo indrindra ary izay ilainao hiasa aloha.
Ny fanambadiana rehetra dia misy fanamby satria olona roa tsy maintsy ihodivirana mifanohitra indraindray.
Saingy, raha afaka mahazo tsara ireo zavatra lehibe ianao, dia tsy hisy fiantraikany be eo aminao samy izy ireo zavatra kely ireo.
Raha misy zavatra manokana ataonao izay fantatrao fa mahasosotra ny vadinao izao dia andramo faran'izay mafy ny tsy fanaovanao izany - raha heverina, izany hoe fanovana mety izy ireo.
Toy izany koa, raha misy zavatra irian'ny vadinao Tsy manaova, miezaha manao azy - indray, raha toa ka fangatahana mirindra izy ireo.
Mety manontany tena ianao maninona ianao no tokony hiova ho an'ny vadinao mba hanaiky anao tahaka anao izy ireo.
Fa misy ny fiovana tsara ary avy eo ny fiovana ratsy. Ny fanovana tsara dia mety ho tsara ho anareo roa. Ny fanovana ratsy dia mirona ho azy ireo ihany.
Ny fahatongavana ho malala-tsaina kokoa sy vonona hihaino ny fomba fijery manohitra ny anao manokana dia fiovana tsara.
Ny fanapahana namana manokana amin'ny fiainanao satria ny sakaizanao tsy dia tia azy ireo dia fiovana ratsy (raha tsy ianao koa dia jereo fa misy akony ratsy aminao io namana io).
7. Miresaka ary mieritrereta tsara momba ny vadinao.
Ny eritreritrao dia misy fiantraikany betsaka amin'ny fahatsapanao toy ny fahatsapanao ny eritreritrao.
Ka rehefa mieritreritra tsy dia tsara momba ny vadinao ianao dia manome hery ny fahatsapanao ratsy azy ireo.
Ary raha mitaraina momba ny namanao na ny fianakavianao ny zavatra ataonao dia ho sahirana ianao hahatsapa ho tsara amin'izy ireo.
Soa ihany fa mandeha amin'ny fomba hafa koa io.
Raha afaka mifantoka amin'ireo hevitra tsara ananan'ny namanao ianao dia hamporisika anao hanana fahatsapana tsara kokoa momba azy ireo.
Ary raha milaza zavatra tsara sy mahafinaritra momba azy ireo amin'ny hafa fotsiny ianao, dia mampiroborobo ny fitiavanao sy hikarakaranao azy ireo.
Izany dia momba ny toerana misy ny 'teboka voatondro' ny fifandraisanao sy ny fahafahanao mamadika azy amin'ny toerana tsara kokoa amin'ny fifantohana amin'ny teboka tsara momba ny vadinao sy ny fifandraisanao.
zava-dratsy foana no mitranga amiko
8. Ianaro ny fomba milefitra.
Olona roa tsy hanaiky mihitsy ny zava-drehetra, ary rehefa misy ny tsy fitovian-kevitra dia tsy azo atao ny samy manalavitra ny lalana.
Izay no antony ny zavakanto marimaritra iraisana dia tena ilaina amin'ny fifandraisana.
Ny fahalalana ny fotoana hamelana ny olon-tianao hanana ny làlany, ny fotoana hihaonana eo afovoany, ary ny fotoana hijoroana mafy amin'ny zavatra tadiavinao dia fahaizana lehibe hianarana.
Ny fanalahidy dia ny manapa-kevitra hoe inona no tena zava-dehibe aminao, na dia mitazona fandanjalanjana aza ianao.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, na dia faly aza ianao mamela azy ireo handeha amin'ny zavatra kely maro, mety mendrika ny hihazona mafy farafaharatsiny ampahany kely amin'ny fotoana.
Raha manaiky ny fanirian'izy ireo amin'ny zavatra madinidinika foana ianao, dia tsy hahatsapa ho mila mihetsika izy ireo raha ny amin'ireo zavatra tena tianao.
Raha toa ka rehefa samy mahatsapa tsy te hanaiky ny filan'ny hafa ianareo dia ilaina ny mahita marimaritra iraisana mba samy afaka mahatsapa fahafaham-po farafaharatsiny.
Moa ve ny fifandraisanareo mandra-pahatongan'io fotoana io dia nanjary niara-nipetraka fa tsy tena fifandraisana?
Mety hiara-hiaina ianareo, fa misy dikany ve ny fifandraisanareo?
Hitanao sy ekenao ve izy ireo rehefa miditra ny efitrano, ary ny mifamadika amin'izany?
Mifampiarahaba ny fahatongavan'ny tsirairay any an-trano?
Mifampitsiky ve ianareo?
Raha samy ao an-trano ianareo, nefa manao zavatra misaraka, mijanona ve ny ataonareo mba handehanana fotsiny hijery azy ireo ary hanontany hoe manao ahoana izy ireo?
Toa kely ihany ireo zavatra rehetra ireo, saingy hita taratra eo amin'ny lanjan'izy ireo ny lanjanareo.
Ny fahitana ny hafa dia midika hoe maneho amin'ny fomba kely fa miahy anao ianao. Ny fanamafisana tsy tapaka an'io hafatra io dia manamafy ny fifamatorana zarainao.
10. Mampiasà vola amin'ny nofinofin'ny tsirairay.
Ao amin'ny fiarahanareo hatrizay, efa nahatsapa tena ho nahatakatra tsara ny fiainan'izy ireo ivelanareo ve ianareo mivady?
Fantatrao ve ny nofinofin'izy ireo?
Efa nanampy azy ireo mavitrika hanatratra ireo nofy ireo ve ianao?
Mpampionona azy ireo ve ianao?
Rehefa samy manenjika ny nofinao ny iray aminareo dia matetika lafiny tsara eo amin'ny fiainanao izany.
Mahatsapa hafanam-po ianao amin'izay zavatra kendrenao.
Noho izany, amin'ny alàlan'ny famelana ny tsirairay hifampizara amin'ireny fikatsahana ireny - na dia mpanohana sy torohevitra fotsiny aza izy io - mizara ny fihetsem-po miabo miaraka amin'izy ireo ianao.
Tsy mila manana nofy mitovy ianao. Mila mpandray anjara mavitrika amin'ny fifanosehana amin'izy ireo fotsiny ianao.
11. Mamorona tanjona sy nofinofy iraisana.
Araho akaiky ny teboka teo aloha, rehefa manomboka eo amin'ny fifandraisanareo ianao dia alao antoka fa manatevin-daharana ny tanjonao ianao ary manana tanjona na nofinofy izay iaraha-mizaranao.
Izy io dia mety ho loharanom-panentanana lehibe ho anao roa ary afaka hahatonga ny dianao hiaraka hahatsapa ho tena misy kokoa.
Tsy olona roa intsony no mifanakaiky ianareo dia manamboatra ny lalan'ny fiarahanareo manokana ho an'ny roa tonta.
inona no nanjo an'i lars sullivan
Mety ho zavatra tena akaiky izany satria tsy misy olon-kafa tafiditra. Nofinofisinao izany ary afaka ny ho loharanon'ny fifanohanana sy torohevitra ho an'ny tsirairay.
Ny tanjona sy ny nofinofy nozaraina dia manampy anao hamantatra izay tianao samy ho tian'ilay fifandraisana ao anatin'ny fotoana maharitra.
Te hanana fianakaviana ve ianao?
Aiza no mety hipetrahanao?
Karazana fomba fiaina tianao hitondrana inona?
Mety ho anisan'ny ho avinao ve ny orinasa iray?
Rehefa manana zavatra azonao ifanarahana sy iasa ianao, dia manomboka manao ekipa kokoa ary tsy olona roa intsony.
12. Mandehana amin'ny daty tena izy.
Raha vao nifankahita sy nifankatia aloha dia azo antoka fa nandeha niaraka, sa tsy izany?
Ary na dia nijanona tsy ho 'daty' aza izy ireo dia mety nanao hetsika maro niaraka.
bandy manomboka miantso fa tsy mandefa sms
Nandritra ny fotoana nifaneraserana dia mety ho lasa vitsy sy lavitra be ireo zavatra ireo.
Tsy mandany fotoana be kalitao toy ny taloha intsony ianao, na dia mety miara-mipetraka aza ianao.
Mety samy manana ny fialam-bolinao manokana miaraka amin'ny namanao ianao, na mety mandeha misotro toaka sy misakafo hariva miaraka amin'ny vondrona mihoatra noho ianareo roa ihany.
Saingy ny alin'ny daty dia ampahany tena manampy amin'ny fitazonana - ary amin'ity tranga ity dia mamelombelona - ny fifandraisanareo.
Ka hanombohana indray, mandehana amin'ny daty… ary maro amin'izy ireo.
13. Manehoa fitiavana bebe kokoa.
Oroka, fifamihinana, sandry malefaka eo an-tsorok'ilay vadinao rehefa manasa lamba izy ireo…
… Zava-dehibe ireo zavatra ireo.
Isika olombelona dia zavaboary malemy paika ary Ilaina ny mikasika ara-batana hifamatorana amin'ireo mpiara-miasa amintsika.
Raha mbola tsy nisokatra manokana ianao tamin'ny fampisehoana fitiavana hatramin'ny farany dia ataovy izay iarahanareo miasa.
Tsy mila fandaharam-potoana X isan'ny fikasihana isan'andro ianao na inona na inona vao mianatra mamantatra ireo fotoana izay mety mety amin'ny zavatra natoraly.
Ireto zavatra kely ireto dia miasa mahagaga amin'ny fanalefahana izay fifanenjanana mety misy eo aminareo roa. Mampita ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao mazava tsara sy mahery toa ny teny rehetra izy ireo.
Raha mila torohevitra lalina momba an'io ianao dia vakio ny tari-dalanay: Ahoana no hahasambatra kokoa ny sakaizanao: 6 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hanombohana indray ny fifandraisanareo?Araka ny efa nolazainay, ity fomba ity dia mety hahomby kokoa amin'ny alàlan'ny fanampian'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana hitarika anao (na ianao irery na miaraka mpivady).Ka maninona raha mifampiresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hamantatra. Tsotra.
16 Fomba azo antoka hamerenana amin'ny laoniny ny fifandraisanareo
Fomba mahafinaritra 30 hanehoana ny fankasitrahanao ny sakaizanao
Ny tsingerin'ny fifandraisana manosika sy ny fomba hialana amin'ity dinamika ity
Ahoana ny fomba hiatrehana lolompo amin'ny fifandraisanao: 12 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t
impiry ianao no tokony hiaraka amin'ny sakaizanao
mariky ny fieboeboana amin'ny lehilahy
inona ny toetran'ny namana tsara
ahoana no hilazana raha tianao izy
ahoana no ahalalako raha tsara tarehy aho